Disemba 2021 – Amathiphu we-Android Cheats
Izinqolobane Zanyanga zonke: Disemba 2021
I-ZIO kanye Nemiqulu Yomlingo Yokukopela&Hack
“Umlingo kufanele ube owabantu!” I-Magic Scrolls ivumela ngisho nabantu abavamile ukuthi basebenzise umlingo!Nawe ungaba isangoma esiqine kakhulu emhlabeni inqobo nje uma unemilingo eskrolayo eyenziwe ngu-Zio! —————————————————————————————-Empini phakathi kwama-mages nama-warlocks phezu komhlaba we-wizarding 'Aerok'…'Malume’ waphumelela ukuvala i-warlock enamandla kakhulu.Nokho, walahlekelwa okuningi kwakhe... Funda kabanzi »
Isigaba: Aphambe futhi Hack noma Amathiphu Amathegi: CheatsHack, Umlingo, Scrolls, ZIO
I-Poppy Punch – Bakhiphe! Ukukopela&Hack
I-Poppy Punch ngumdlalo we-Poppy fighter! Khipha wonke umuntu eringini ngesibhakela esigobile. Munye kuphela ongaba ngumnqobi! Wena nezinye izimbangi ninguPoppy. Wonke ama-fighters azohlangana ubuso nobuso eringini, futhi wonke umuntu uyozilwela yena! Umsebenzi wakho ukukhipha bonke abamelene nawe ... Funda kabanzi »
Isigaba: Aphambe futhi Hack noma Amathiphu Amathegi: CheatsHack, Knock, Poppy, Punch
Sword Master: I-Ragdoll Fight 3D Cheats&Hack
Ingabe uzilungele izimpi ezijabulisayo ku-Sword Master: I-Ragdoll Fight 3D? Sekuyisikhathi sokuba umpetha wenkemba we-ragdoll ngokwakho! I-gameplay ilula kakhulu. Lawula eziyisishiyagalombili futhi fly ngenkemba ukusika zonke izitha. Thola ukhiye bese uphuma ku-maze. Inkemba yakho ingaqhumisa imiphongolo ye-TNT, phula izitini,… Funda kabanzi »
Isigaba: Aphambe futhi Hack noma Amathiphu Amathegi: CheatsHack, Ukulwa, Master, Ragdoll, Inkemba
Ngiyibonile: Thola Wonke Umehluko! Ukukopela&Hack
Ingabe ukulungele ukuba genius ekutholeni umehluko? Dawuniloda umdlalo wethu omusha wamahhala wephazili 'Ngiyibonile' bese uzama ukuthola umehluko ezithombeni.Izakhiwo ezinhle nezindawo ezinhle, izinto ezithakazelisayo, izimoto ezibizayo nezilwane ezinhle zikulindile kulo mdlalo! Lona umdlalo ongcono kakhulu wokuqeqesha ukucabanga kwakho okunengqondo ... Funda kabanzi »
Isigaba: Aphambe futhi Hack noma Amathiphu Amathegi: CheatsHack, umehluko, Find, Spotted
Upopi Fihla ‘N Funa – Ukukopela&Hack
I-Poppy Fihla 'N Funa Isikhathi sokudlala, umdlalo omdala omuhle wokucasha nokufuna nge-horror twist encane. Gijima ucashe ku-Huggy Wuggy noma ube ngu-Huggy ngokwakhe ukuze ubambe abanye abadlali. Thola noma utholakale, kuphuma kuwe! Njengomfihla, kufanele usheshe ukubalekela isandla sikaHuggy ngenkathi usiza… Funda kabanzi »
Isigaba: Aphambe futhi Hack noma Amathiphu Amathegi: CheatsHack, hide, Poppy, seek
Amabhola e-Pop – Ukukopela&Hack
Zithokozise ngesikhathi sakho ongazijwayele ngamabhola e-Pop Pop ! Uma uthanda lo mdlalo, sicela wabelane ngayo nabangani bakho futhi nijabule ndawonye! Imithetho SIMPLE:1、Hlanganisa amabhola ngenombolo efanayo2、Thola amabhola ezinombolo eziphezulu njengoba uhlanganisa amabili3、Thola izici ezintsha ze-Balls Merge:1、Umklamo omuhle & imiphumela emangalisayo yomdlalo2、Kulula ukufunda… Funda kabanzi »
Isigaba: Aphambe futhi Hack noma Amathiphu Amathegi: Balls, CheatsHack, POP
I-Poppy Horror: Isahluko sokuqala – Ukukopela&Hack
Ungakwazi yini ukuxazulula wonke ama-puzzle futhi uwenze aphile kule fektri elahliwe? Ithoyizi eliziphindiselela okuthiwa u-Huggy likulindile ngaphakathi kwale maze. Sebenzisa i-Blue Hand yakho enamandla ne-Red Hand ukuze ugqekeze amasekhethi kagesi noma ubambe noma yini ukude. Hlola indawo engaqondakali… futhi ungabanjwa! Kuwo wonke umdlalo, wena... Funda kabanzi »
Isigaba: Aphambe futhi Hack noma Amathiphu Amathegi: Isahluko, CheatsHack, Horror, Poppy
I-Huggy Stretch Game – Ukukopela&Hack
Siyakwamukela kumdlalo omusha we-stretch puzzle. Masidlale umdlalo we-Huggy Stretch Game futhi sisindise i-Huggy ngokuqedela amazinga athokozisayo emidlalo emisha yephazili. ❄️ IDLALA KANJANI IMIDLALO YE-STRETCH:• Chofoza futhi welule imilenze noma izingalo ukuze ufinyelele lapho uya khona• Umthetho awukona ukwelula kakhulu, futhi uqaphele kakhulu ... Funda kabanzi »
Isigaba: Aphambe futhi Hack noma Amathiphu Amathegi: CheatsHack, umdlalo, Huggy, Stretch
I-Fury Battle Dragon – Ukukopela&Hack
Udrako umemeza unyakazisa izulu nomhlaba,futhi ikhono linamandla futhi lihle.Uma usuka kude, udrako onamakhanda amane umi ngokuziqhenya phakathi kwezulu nomhlaba.Amakhanda awo amane aqoqa amandla ezinto ezihlukahlukene, kuhlanganise ilangabi, ukuduma, ukuqhwa kanye nombani.Udrako womlingo uwasaphaza ngamandla akhe ayisisekelo, futhi abantu abanonya bahlasela udrako... Funda kabanzi »
Isigaba: Aphambe futhi Hack noma Amathiphu Amathegi: Impi, CheatsHack, DRAGON, Fury
Izinganekwane 2 – Ukukopela&Hack
Kwafika isibikezelo esesabekayo ku-oracle - inhlekelele iyeza. Umthakathi oyimbuka usezosindisa umhlaba noma awubhubhise… “Izinganekwane: I-Cataclysm” iwumdlalo wokuzidela ohlotsheni Lwezinto Ezifihliwe, enenqwaba yemidlalo emincane namaphazili, izinhlamvu ezingenakulibaleka kanye nezimfuno eziyinkimbinkimbi. Kwafika umbono esiprofethweni. A... Funda kabanzi »
Isigaba: Aphambe futhi Hack noma Amathiphu Amathegi: CheatsHack, Inganekwane, Tales